Into enika i-grapefruit incasa kunye nevumba layo zinokunika izinambuzane ezitshabalalisayo i-boot-News-Lianyuan Kangbiotech Co., Ltd
Into enika i-grapefruit incasa kunye nevumba layo zinokunika izinambuzane ezitshabalalisayo
Ixesha: 2020-10-14 Indawo: 134
INDIANAPOLIS, Sept. 11, 2013 Ndiyabulela kwindlela engabizi kakhulu yokwenza izixa ezikhulu ezinqabileyo kunye nexabiso lesithako, isazinzulu sithe apha namhlanje.
Ingxelo yetekhnoloji entsha yokwenza isithako, i-nootkatone, ekwakudingeka ukuba ivunwe kwiitoni zediliya, yayiyinxalenye ye-246th Intlanganiso kaZwelonke kunye nokuBonakaliswa kweAmerican Chemical Society (ACS), elona lizwe likhulu lezenzululwazi. Intlanganiso, ebandakanya phantse i-7,000 yeengxelo ngenkqubela phambili entsha kwisayensi kunye nezinye izihloko, iyaqhubeka nanamhlanje.
"Imveliso entsha esekwe kwi-nootkatone iya kuba neenzuzo ezininzi ngaphezulu kwezinto ezikhoyo zokugxotha iingcongconi esekwe kwi-DEET," utshilo uRichard Burlingame, Ph.D., othe wenza ingxelo. “INootkatone sisithako esibanzi esibonisa ukuba siyasebenza njenge-arhente yokulawula iingcongconi, amakhalane kunye neencukuthu. I-Nootkatone isetyenziselwe iminyaka ukunika iziselo incasa ye grapefruit. Kukhuselekile ukutyiwa, inencasa emnandi yesitrasi, ayinamafutha, iyazigxotha kwaye iyazibulala izinambuzane, kwaye akufuneki ibe nexhala le-DEET. ”
UBurlingame, okunye no-Allylix, Inc., inkampani ehlaziya imichiza eLexington, eKy., Uthethe kwisimpoziyam eyayinesihloko esithi “Biopesticides: State of the Art and future Opportunities.” Ibandakanya ukuboniswa (izicatshulwa ezibonakala ngezantsi) kwinkqubela phambili yokuphuhlisa amayeza okubulala izitshabalalisi amatsha kwimithombo yendalo, okanye ipateni ngokusondeleyo emva kwemveliso yendalo esebenzayo kulawulo lwezinambuzane.
"Injongo yesimpoziyam kukuxoxa ngenzululwazi emva kwezi mveliso, uninzi lwazo lusebenza ngeedosi ezisezantsi kwaye alunabungozi ebantwini kunokubulala izitshabalalisi," utshilo uJames N. Seiber, Ph.D., weYunivesithi yaseCalifornia. , UDavis. Waququzelela i-symposium kunye no-Aaron Gross noJoel Coats, Ph.D., bobabini beYunivesithi yase-Iowa State, kunye noStephen Duke, Ph.D., weSebe lezoPhando lezoLimo laseMelika.
I-Burlingame ikhankanye i-nootkatone njengomzekelo obalaseleyo wamandla okuphuhlisa i-pesticides esekwe kwimithombo yendalo. INootkatone yinxalenye yeoyile ekwiziqhamo zomdiliya, kwaye ibikuluhlu lwezinto zoLawulo lwezoKutya noLawulo lweziyobisi e-US ezaziwa ngokubanzi njengekhuselekileyo ukuba zisetyenziswe ekutyeni. Sele isetyenziselwa ukurhweba iminyaka njengokunambitheka kokutya kunye neziselo kunye nesiqholo sevumba leziqholo. Ezo zicelo zifuna kuphela isixa esincinci se-nootkatone, kunye nexabiso- $ 25 nge-ounce xa ukhutshwe kwitrapefruit- yayingeyona nto ibalulekileyo. Yayibiza kancinci xa iveliswa kwinto ebizwa ngokuba yi-valencene, ekhutshwe kwiiorenji.
Isidingo somthombo ongaphezulu woqoqosho we-nootkatone siqinisiwe emva kokuba izazinzulu zase-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zifumene ukusebenza kwe-nootkatone ekulawuleni amakhalane, iingcongconi kunye nezinye izinambuzane. I-Nootkatone ekhutshwe kwi-grapefruit, nangona kunjalo, iya kubiza kakhulu kuphuhliso lwemveliso yabathengi. Olo setyenziso luya kufuna isixa esikhulu se-nootkatone. UAllix ngoku usebenza nezazinzulu kwiCDC ukuphuhlisa i-nootkatone yokusetyenziselwa urhwebo njengearhente yokulawula izinambuzane.
UBurlingame uchaze indlela u-Allylix asebenzise ngayo itekhnoloji yobunini yokuphuhlisa indlela yokuvelisa i-valencene kwimvubelo ekhula kwimizi mveliso yokubilisa. Iingcali zivuna i-valencene kwaye zisebenzise inkqubo yemichiza ukuyiguqula ibe yi-nootkatone. U-Allylix uthe le nkqubo yenza ukuba kuthengiswe i-nootkatone ngexabiso elikhuphisanayo.
"Iziphumo ze-nootkatone zihlala ixesha elide kakhulu kunalezo zokugxotha ezisemarikeni ngoku," utshilo. "Kwaye nootkatone ibonisa isithembiso sokuba yeyona arhente isebenzayo kumakhalane abangela isifo seLyme."
I-Nookatone ikwasebenza ngendlela entsha, ke inokusetyenziswa ngokuchasene nezinambuzane ezithi zenze ukunganyangeki kwaye zinciphise izibulala-zinambuzane eziqhelekileyo, kwaye akunakulindeleka ukuba zenzakalise abantu okanye izilwanyana.
U-Allylix ngoku uthengisa i-nootkatone kuphela ekusebenziseni incasa kunye nezicelo zevumba elimnandi. Inyathelo elilandelayo libandakanya ukufumana imvume kwi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yaseMelika ukuba ithengise i-nootkatone yolawulo lwezinambuzane. “Abakayivumi okwangoku, ngoko ke akukho mveliso ikhoyo ngoku e-US ebandakanya i-nootkatone njengesixhobo esisebenzayo sokulawula izitshabalalisi,” utshilo uBurlingame. "Kodwa kwixa elizayo, isenokuba sesona sixhobo siphambili sokugxotha izinto ekusetyenzisweni kwimpahla okanye kulusu njengesitshizi, okanye njengesepha okanye ishampu."
Oososayensi bayivuma inkxaso-mali evela kwi KwiSizwe soSayensi Foundation ngenkqubo ye-SBIR kunye KwiSebe leMandla.
Olu phando lwenziwa kwintlanganiso yeAmerican Chemical Society！